Election Result 2019: Mba Briten sị na mmeri Buhari kwụ ọtọ - BBC News Ìgbò
Election Result 2019: Mba Briten akwadola mmeri Buhari
Nke na-eme gbururgburu dịka Naijiria na-eme ntuliaka onyeisiala
Buhari emeriela ntuliaka 2019
Ndịisiala mba ọzọ amalitela ikele Buhari
Ngụkọ ihe a tụtara na vootu
Ụlọọrụ Inec ọzọ agbaala ọkụ
INEC adọtịala oge e ji atụ vootu
A na-emegbu ndị igbo na Legọs?
Ihe Buhari, Atiku na ndị osote ha kwuru maka mmeri
Mba Briten kwenyere na mmeri Buhari
Nke Chimamaka Ihenacho na Uche Akolisa
Ebisara na 7:00 28 Febụwarị 20197:00 28 Febụwarị 2019
Gere akụkọ ị kwesịrị ịma n'otu nkeji
Ebisara na 5:02 28 Febụwarị 20195:02 28 Febụwarị 2019
Mba UK na-akwado mmeri Buhari
Minista na-ahụ maka ihe banyere mpaghara Afịrịka na mba Brịten bụ Harriet Baldwin kelere Onyeisiala Buhari maka mmeri o nwetere na ntuliaka e mere na Naịjirịa n’ụbọchị Satọde gara aga.
Baldwin kwuru na ọnụọgụgụ Inec wepụtara na ọ bụ ihe e nwetere na ya bụ ntuliaka, bụ nke dịka nke e nwetere n’atụmatụ Bekee kpọrọ “Parrallel Vote Tabulation”.
Nke a pụtara na mba Briten na-akwado ọnụọgụgụ vootu a ma na-asị ndị Naịjirịa ka ha nabata ya makana ọ kwụ ọtọ.
Mba Briten kwukwara na obi adịghi ha mma maka ndị isi ha lara na ntuliaka a, ma na-asị ndị nwe ha jide obi ha aka.
N'agbanyeghi nke a, Mba Briten kwuru na uche ha dị n'okwu ọtụtụ mmadu na-ekwu na usoro e ji mee ya bụ ntuliaka adịghị etu ziri ezi.
Ha sị ka ndị a jiri usoro udo chụba ewu a ha si gbapụru n’ọba.
Ebisara na 4:34 28 Febụwarị 20194:34 28 Febụwarị 2019
Ebee ka ndị APC Anambara gara n'ụdịrị ụbọchị a?
Ụnyaahụ, BBC Igbo gara n'ulo pati APC nọ na Steeti Anambara, ịji mara ka ndị otu ya bụ Pati sịrị enwe ọṅụ maka mmeri Pati ha meriri na ntuliaka afọ 2019, ọ chọpụtara na ebe niile dị ka ebe a gbara ọsọ agha, enweghị ihe ụzụ maọbụ mmemme na-eme ebe ahụ.
Ebisara na 4:33 28 Febụwarị 20194:33 28 Febụwarị 2019
Unu asaala chi?
Anyị na-asị unu nno n'ụtụtụ ụbọchi ikpeazụ nke ọnwa Febụwarị 2019.
Ebisara na 16:48 27 Febụwarị 201916:48 27 Febụwarị 2019
Atiku sị na ya anabataghị mmeri Buhari meriri ya
N'okwu ọ gwara ndi ntaakuko taa, onye zọrọ ọchịchi n'okpuru PDP sị na nrụrụaka karịrị n'ime ntuliaka emere na Satọde gara aga.
Ebisara na 15:10 27 Febụwarị 201915:10 27 Febụwarị 2019
Peter Obi, Uche Secondus na ndi isi PDP ndi ọzọ awụchiela ebe Atiku ga-agwa ndị ntaakụkọ okwu
Ebisara na 14:44 27 Febụwarị 201914:44 27 Febụwarị 2019
Atiku ga-agwa ndị ntaakụkọ okwu n'elekere anọ
Site n'ozi Austin Akobundu bụ odeakwụkwọ ndị na-ahazi achụmntavootu Atiku Abubakar kesara, ọ ga-agwa ọha okwu taa.
Ọ ga-ekwu okwu n'ihu ndị ntaakụkọ mbaụwa na Musa Yar'Adua Center dị n'Abuja n'elekere anọ nke taa.
Ebisara na 14:40 27 Febụwarị 201914:40 27 Febụwarị 2019
A mụọla Buhari ọzọ
Nwunye otu nwoke aha ya bụ Ahmed Dasuki, mụrụ nwa n'ụtụtụ, ha gụrụ ya "Buhari" maka ọṅụ mmeri onyeisiala.
Ebisara na 14:15 27 Febụwarị 201914:15 27 Febụwarị 2019
Ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ Buhari
Ndị dịka Ebuka Obi-Uchendu tinyere ọnụ n'okwu gbasara atụmatụ ọhụrụ Buhari ga-ewebata n'ọchịchị agba abụọ ya.
Ebe ụfọdụ chọrọ ịma etu ọ ga-esi kpọpụta ndị mmaọ̄ụ n'ụbịam, ndị ọzọ chọrọ ka ọ chụpụ ụfọdụ ndị so ya rụọ ọrụ n'agba nke mbụ ya.
Ebe ọ gbasara egwuregwu, ndị mmadụ chọrọ ka o bido n'oge tinye ya anya.
Ebisara na 13:54 27 Febụwarị 201913:54 27 Febụwarị 2019
Ndị n'ọchị, ndị n'akwa
Kedụ ebe ị kwụ akwụ?
Ebisara na 13:33 27 Febụwarị 201913:33 27 Febụwarị 2019
Muhammadu Buhari anatala asambodo ọchịchị ya
Onyeisiala Muhammadu Buhari gara binyeaka n'akwụkwọ ikike ya.
Ndị nọ n'ime ụlọ ahụ nọ na-eti "sai baba" ka o bilitere ịnara asambodo ya.
Dịka iwu nnata asambodo a si kwuo, o kwuru okwu nnabata.
O kelere Chineke maka ime ka ọ dị ndụ hụ ụbọchị a.
O kwuru na ọnụụzọ gọọmentị ya ghere oghe, na ọ na-atụ anya iwulite mba Naịjirịa karịa ka ọ dị ugbua.
O kelere ndị tụnyeere ya vootu nakwa ndị nyere aka hụ na achụmnta vootu ya gara sịrịrị werere.
Ebisara na 13:24 27 Febụwarị 201913:24 27 Febụwarị 2019
Yemi Osinbajo anatala asambodo ikike ya
Yakubu Mahmood bu ụzọ nye osote onyeisiala Yemi Osinbajo asambodo nke ya ka o binye aka, tupu o nye onyeisiala Muhammadu Buhari nke ya.
Ka Osinbajo bilitere ịnata nke ya, nwunye sochiri ya azụ, ebe ndị mmadụ malitere ịtụ ụzụ, ịgụ egwu nakwa ịkụ aka.
Ebisara na 13:15 27 Febụwarị 201913:15 27 Febụwarị 2019
Buhari na-akwado ịnata asambodo ikike ọchịchị ya n'Abuja
Sonye ebe a ka ị hụ usoro ya.
Onyeisi ụlọorụ INEC bụ Yakubu Mahmood na-enye ha ya bụ asambodo.
Ebisara na 11:10 27 Febụwarị 201911:10 27 Febụwarị 2019
Etu ndị mmadụ si nabata mpụtara ntuliaka
Ndị nọ na mpaghara ọwụwa-anyanwụ na-ekwu etu ha si hụ mmeri Buhari.
Chidi Nlemchi bụ onye ọnụ na-eru n'okwu n'ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị, batakwara na BBC Igbo ịkọwa otu ihe maọbụ abụọ gbasara mpụtara ntuliaka a.
Ebisara na 9:33 27 Febụwarị 20199:33 27 Febụwarị 2019
Agaara m akpọ Buhari ma ọ bụrụ na o meriri n'ụzọ ziri ezi - Atiku
Atiku Abubakar zọrọ ọchịchị ọkwa onyeisiala n'okpuru PDP, ekwuola na ntuliaka a agaghị n'anya ọma.
O kwuru na ọ bụ ya gbochiri ya ịkpọ Onyeisiala Muhammadu Buhari n'ekwentị, bunye ya ụkpa ekele maka mmeri o meriri.
N'ihi nke a, o kwuru na ọ nabataghị mpụtara ntuliaka a, na ọ ga-agba ha akwụkwọ n'ụlọikpe.
Ebisara na 9:16 27 Febụwarị 20199:16 27 Febụwarị 2019
Ndịisiala Ghana, Niger na Senegal na-ekele Buhari
N'ozi Femi Adesina bụ ọnye ndụmọdụ pụrụiche nye onyeisiala Muhammadu Buhari zisara, o kwuru na oyeisiala Nana Koffi-Addo nke mba Ghana, Mahamadou issoufou nke mba Niger, na Macky Sall nke Senegal, bunyere Buhari ụkpa ekele maka mmeri ya.
Ebisara na 8:00 27 Febụwarị 20198:00 27 Febụwarị 2019
Onyeisiala mba Kenya ekeleela Buhari 'nwanne ya nwoke'
Onyeisiala mba Kenya bụ Uhuru Kenyatta, ebunyela Buhari ụkpa ekele maka ịzọta ọkwa onyeisiala ọzọ.
Kenyatta kpọrọ ya “nwanne m nwoke”, kwuru sị na mmeri Buhari “gosiri ntụkwasịobi na okwukwe ndị Naịjiria nwere n’ikike ya ibugo Naịjirịa n’ogo ọganiihu”.
Kenyatta kwuru na Naịjirịa na mba Kenya nwere ọtụtụ ihe dị mma jikọtara ha, na ọ na-atụ anya na ha ka ga-ejikọ aka ọnụ n’ịrụkọ ọrụ, nke ga-amịpụta ezi mkpụrụ nye mba abụọ a.
Ebisara na 7:16 27 Febụwarị 20197:16 27 Febụwarị 2019
Ihe Buhari kwuru n'okwu nnabata ya
Onyeisiala Muhammadu Buhari etinyela ọnụ na mmeri o nwetara na ntuliaka 2019 nke ga-enye ya ohere ịbụ onyesiala ruo afọ 2023.
O kelere Chukwu maka inye ya ndụ iji hụ ka pati ya bụ APC meriri na ntuliaka ahụ, ma gakwa n'ihu kelee ndị Naịjirịa tunyeere ya na ntuliaka ahụ.
Buhari kpọpụtara aha Bola Tinubu, Adams Oshiomhole, Rotimi Amaechi na ndi ọzọ niile aka ha dị na mmeri ya.
Ọ sị na n’agbanyeghi na e mere ntuliaka ọfụma na n'udo ụbọchị Satọde, ndị ọchọ okwu wụnyere aja na garị n’ụfọdụ steeti, ma kwuo na ndị nchekwa ga-anwụchị ndị aka ha dị na ya.
Buhari sị na obi adịghị ya mma maka ndị ntuliaka a tara isi ha, nke mere na ndị nchekwa ga-etinye anya hụ na e chekwara vootu ndị mmadụ na ntuliaka na-abịa.
O kelere ndị nchekwa maka ọrụ ha rụrụ, ma sị ndị nkwado ya ka ha ghara iji mmeri a mee ndị mmadụ akaja.
Buhari gara n'ihu kwe nkwa na ọ ga-agbalị karịa etu o mere n'agba nke mbụ, n’ihe gbasara nchekwa, igbanwe ebe akụnaụba obodo si apụta, nakwa ibuso mpụ na nrụrụaka agha.
Ebisara na 6:57 27 Febụwarị 20196:57 27 Febụwarị 2019
Gere akụkọ gbasara mmeri Buhari nakwa ihe na-aga na mbaụwa n'ime otu nkeji
Ebisara na 5:34 27 Febụwarị 20195:34 27 Febụwarị 2019
Eunice Atuejide na-aba mba maka mmeri Buhari
"Ọ na-atụ n'anya ma na-ewe m iwe, mana isi na-ebu m makana anyị mere ihe niile anyị kwesịrị iji merie ntuliaka ma zighachị nwoke ahụ (Buharị) Daura." - Eunice Atuejide, onye zọbụrụ ọchịchị n'okpuru National Interest Party.
Page 1 nke 9